Xukuumadda Somaliland oo ku Guulaysatay Xaqiijinta Mid ka mida Himiladeeda - Wargane News
Home Somali News Xukuumadda Somaliland oo ku Guulaysatay Xaqiijinta Mid ka mida Himiladeeda
Wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Somaliland, ayaa shaacisay in uu si rasmi ah u soo go’ay dalagga mashruuca wax soo saarka beeraha banka Wajaale, kaas oo ay gacanta ku haysay wasaaradda beeraha Somaliland.
Wasaaradda Beeraha Somaliland ayaa sheegtay in sidii loogu talo galay uu u soo go’ay dalaga Qamandida, kaas oo ay wasaaraddu beertay muddo saddex bilood laga joogo, isla-markaana qayb ka ah dalagyada wasaaraddu ku beertay mashruuca banka Wajaale, waxaana ka qayb galay munaasibad loo qabtay dalagaasi, wefti uu hoggaaminayey wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha md. Axmed muumin seed, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Dr. Axmed Cali Maax, wasiirrada wasaaradaha xannaannada xoolaha, gaadiidka iyo horumarinta jidadka, wasiir ku xigeenka wasaaradda qorshaynta, isu-duwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Gabiley iyo khuburro ka mid ah wasaaradda beeraha.
Wasaaradda beeraha ayaa goynta dalagan oo si tijaabo ah loo beeray, waxay u adeegsatay cagaf casri ah oo goynaysa, taas oo kala saarraysa midhaha, caleenta iyo wixii kale ee la socda, taasi oo aakhirkii midhihii qamadiga oo haadsan ku shubtay meel loogu talo-galay.
Qamadingan sidii loogu talo-galay u baxay ee la soo gooyey oo wejiga koowaad u noqonaya mashruuca dalagyada wasaaradda beeruhu ka qodday gobolada dalka ee sidii qorshuhu ahaa u hirgalay, ayaa waxa faahfaahin ka bixiyey marxaladihii uu soo maray iyo qorshayaasha horumarinta beeraha ee wasaaraddu waddo masuuliyiinta wasaaradda horumarinta beeraha, halka wasiirrada kale ee ka qayb-galay munaasibaddaasina ay wasaaradda ku bogaadiyeen dedaalka ay waddo.
Wasiir Axmed Muumin Seed oo ugu horreyn halkaa ka hadlay ayaa sheegay inay wasaarad ahaan ku faraxsan yihiin in qamadigii ay sida tijaabada ah ugu biireen banka Wajaale uu sidii loogu talo-galay u soo go’ay isla markaana wakhtigan la gaadhay xilligii la goosan lahaa.
Wasiir Seed waxa kale oo uu u mahad-celiyey masuuliyiinta wasaaradda beeraha u qaabilsan mashruuca banka Wajaale, waxaanu sheegay in maadaama oo ay ogaadeen in qamadigu ku wanaagsan yahay dhul-beereedka ay sii wadayaan. Isla markaana wax soo saarkiisa ay kordhin doonaan, qamadigga hadda soo go’ayna wasaaraddu u isticmaali doonto siidh ahaan.
Wasiirka horumarinta beeraha oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in qorshaha koowaad ee wasaaraddu tahay sidii Somaliland u gaadhi lahayd isku-filaansho dhanka cuntada ah, si looga maarmo cuntooyinka dibedda laga soo waarido, sidaa darteedna ay dadweynaha ku dhiiri-gelinayaan inay cunaan cuntada waddanka ka soo go’da.
Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Dr. Axmed Cali Maax oo ugu horreyn halkaa ka hadlay ayaa yidhi “Maanta waxaanu joognaa qaybta qamadinka ee banka Wajaale, qamadinkani wuxuu ku soo baxay 2 bilood iyo 28 maalmood, sidaa darteed halkan waxa jooga mishiinkii (cagaftii) goynaysey.”
Wasiirrada wasaaradaha xannaannada xoolaha, gaadiidka iyo horumarinta jidadka, wasiir ku xigeenka wasaaradda qorshaynta qaranka oo iyaguna halkaa ka ka hadlay ayaa wasiirka, agaasimaha guud iyo hawl-wadeennada wasaaradda beeraha ku bogaadiyey dedaalka ay ugu jiraan in dalku gaadho isku-filaansho dhanka cuntada ah.
Ugu dambayn, waxa xusid mudan inuu masuuliyiinta wasaaradda beeraha iyo xubnaha kale ee xukuumadda ka socday uu halkaa ku soo dhaweeyay maareeyaha mashruuca Wajaale u qaabilsan wasaaradda beeraha Mowliid Xasan Cabdi.
War Deg Deg Ah: Daawo Gudoomiye Cirro Oo Imika Shaaciyey Xildhibaano La Layey